US and Argentina agree to modernize 1985 Air Transport Services Agreement | Airline News
Ikhaya » Iindaba zeenqwelo moya » I-US neArgentina ziyavuma ukusiphucula isiVumelwano seeNkonzo zoThutho loMoya ngo-1985
I-US neArgentina ziyavuma ukusiphucula isiVumelwano seeNkonzo zoThutho loMoya ngo-1985
Namhlanje, uNobhala Wezothutho wase-US u-Elaine L. Chao kunye noMphathiswa Wezothutho wase-Argentina u-Guillermo Dietrich batyikitye isiVumelwano soLungiso esenza ukuba isiVumelwano seNkonzo zoThutho lomoya sihambele phambili phakathi kwe-United States ne-Argentina. Ukutyikitywa kwesi sivumelwano sibalulekileyo sisiphumo sonyaka wothethathethwano okhokelwa liSebe likaRhulumente kunye neSebe lezoThutho kunye noRhwebo, kunye noogxa babo baseArgentina.
Ukuqukunjelwa kweProtokholi kubonisa ubudlelwane obusondeleyo kunye nentsebenziswano phakathi kweMelika kunye neRiphabhlikhi yaseArgentina. Ngokuququzelela ukuhamba ngenqwelomoya nangorhwebo, ikwandisa ubudlelwane bamazwe amabini asele eqinile kurhwebo nakwezoqoqosho.
Olu lwalamano lobudlelwane bamazwe amabini phakathi kwe-United States neArgentina luya kuxhamla iinqwelomoya, abasebenzi beenqwelomoya, abahambi, amashishini, abathumeli beenqwelo moya, izikhululo zeenqwelo moya kunye neendawo ngokuvumela ukwanda kokufikelela kwintengiso kubakhweli beenqwelomoya kunye neenqwelo moya zonke zokuhamba phakathi kwamazwe ethu amabini kwaye ngaphaya. Umgaqo-nkqubo uzibophelela kubo bobabini oorhulumente kwimigangatho ephezulu yokhuseleko nokhuseleko. Amalungiselelo ayo aqale ukusebenza namhlanje xa utyikityo.